Izindlu nama-villas anechibi, lokuqasha nokuthengisa esiqhingini sase-Ibiza.
Ama-Villas e-Ibiza | Izindlu nama-villas anephuli yokuqasha nokuthengisa esiqhingini sase-Ibiza.
Phila isipiliyoni esihle se-Ibiza
Phila i-Ibiza Experience ephelele
Thola ucezu lwakho lwepharadesi phakathi kokukhetha kwethu izindlu e-Ibiza
icon / kabili-chevron-downIdalwe nge-Sketch.
Dlulisa amehlo kuqoqo lethu elihle lama-Villas wokuqasha
Ukuqashwa kwama-Villas e-Ibiza
Sizinikezele ekutholeni indawo yakho enhle yamaholide e-Ibiza.
Khetha phakathi kokukhethwa kwethu kwama-villas okunethezeka anechibi noma ama-fincas ajwayelekile anomphefumulo, ama-villas ngamunye kuphothifoliyo yethu akhethwe ngokucophelela futhi anikeze lonke uhlobo lokunethezeka.
Indawo enhle yesimanje futhi enesitayela e-Ibiza
Le ndlu enamagumbi amahlanu okulala eyi-550m2 ebekwe enkabeni yezintaba zase-Ibiza. Umkhathi jikelele uhambisa ukucubungula okuzolile ngomqondo wobuhle bemvelo obungaphelelwa yisikhathi futhi unikezela nge ...
Engeza kuzintandokazi Susa kuzintandokazi
I-finca enhle iyaqashwa e-Ibiza ngokubukwa kolwandle
Le finca ebukekayo yokuqasha e-Ibiza itholakala enyakatho yesiqhingi imizuzu embalwa ukusuka edolobhaneni elidumile laseSan Juan. I-finca ineminyaka engama-300 ubudala futhi ibuyiselwe eMoori ...
Indawo enhle enhliziyweni ye-Ibiza, indawo yokuthula
Indawo enhle e-Ibiza, indawo yokuthula, ifakwe kahle futhi yakhiwe muva nje, inamamitha angama-300 akhiwe, anemishini yokupholisa umoya ngokuphelele. Kuyinto 4 km ukusuka Santa Gertrudis futhi 10 km kusuka ...
Indlu enhle yanamuhla e-Ibiza eduze naseningizimu yesiqhingi
Le villa enhle yanamuhla isebenzisa ukukhanya okungokwemvelo okuvela emafasiteleni amakhulu anikeza umuzwa wesikhala futhi agcizelele ikhwalithi yomklamo wayo. Le ndlu isendaweni esemaphandleni ethule enkabeni ye ...
«Langaphambilini Okulandelayo »
Noma phequlula iqoqo eligcwele
Ibiza, isiQhingi esimhlophe
Amabhishi amahle anamanzi aluhlaza okotshani namawa amakhulu, amadolobhana amahle, i-gastronomy emnandi namanye amakilabhu adume kakhulu emhlabeni. I-Ibiza konke lokhu nokunye okuningi. Amagugu ayo amasiko avela ekushintshaneni ngamasiko ehlukene akha umlando wawo, iPunic, iRoma, iFenike… isenze lesi siqhingi esincane saseMedithera saba inkomba yomhlaba.
Ngakho-ke kungani ujabulela i-Ibiza kuphela ehlobo? Noma ngabe kunguKhisimusi, iSonto lePhasika noma yisiphi esinye isikhathi sonyaka, imindeni ingajabulela imisebenzi eminingi yasolwandle ngenxa yesimo sezulu esimnene nokuchichima kwezinsuku ezinelanga.
Uma udinga iseluleko sokuthi ungahlala kuphi, vele ugcwalise ifomu noma ushayele.
Sizojabula ukukusiza uthole indawo enhle futhi uthole i-Ibiza eyiqiniso.
Bhalisela kwethu Newsletter
Yize idume ngempilo yayo yasebusuku nezindawo ezihamba phambili, i-Ibiza ingaphezulu kakhulu kwamabhishi namakilabhu. Lesi siqhingi sinikeza izindawo zemilingo nezimangalisayo, imvelo engangcolisiwe kanye nekhwalithi enhle yempilo nje ukundiza amahora ambalwa ukusuka kunoma iyiphi indawo eYurophu.
Ibiza yindawo ekahle yokuba nendlu.
Buka uhlu lwethu lwama-villas athengiswayo, amafulethi, kanye namaphrojekthi wokuthuthukisa umhlaba e-Ibiza
Umhlaba uyathengiswa e-Ibiza ngephrojekthi
Intengo yokucela 550.000 €
Indlu kanokusho iyathengiswa Ibiza Botafoch
Intengo yokucela 1.200.000 €
Indlu iyathengiswa e-Ibiza - Marina Botafoch
Intengo yokucela 1.590.000 €
IVilla iyathengiswa e-Ibiza, enyakatho yesiqhingi
Intengo yokucela 1.399.000 €
Imikhawulo esiqhingini sase-Ibiza ngenxa yobhadane lwe-covid-19.
Buyekeza ngomhla ka-17 Nov 2021 Okwamanje uhlaka lomthetho e-Spain aluqinisekisi isibopho sokugoma futhi lubeka ukuvalelwa kwabangagonyiwe, njengoba sekuvele kusunguliwe.
Isimo seCovid 19 - Coronavirus e-Ibiza, eBalearic Islands, eSpain
16 Nov 2021 Okwamanje e-Ibiza naseFormentera kukhona abantu abangama-266
Ukuvulwa okusheshayo kwama-nightclub e-Ibiza.
Imikhawulo e-Ibiza naseFormentera ngenxa ye-coronavirus covid-19 iyasuswa njengoba
Smart Working e-Ibiza
Kusukela kwaqala ubhadane lwe-coronavirus covid-19, abantu abaningi sebejwayela
Amaholide eyacht e-Ibiza
Isisekelo se-superyacht eziqhingini zaseBalearic yithuba elihle kakhulu lokuzwa okuthile
16 Nov 2021 Okwamanje e-Ibiza naseFormentera kunabantu abangama-266 abangenwe yi-coronavirus covid-19. Leli inani eliphakeme kakhulu lezigameko ezisebenzayo zegciwane
Imikhawulo e-Ibiza naseFormentera ngenxa ye-coronavirus covid-19 iyasuswa njengoba isimo sezifo eziseziqhingini zaseBalearic sithuthuka. Amakilabhu e-Ibiza azokwazi ukuvula
Selokhu kuqale ubhadane lwe-coronavirus covid-19, abantu abaningi sebejwayela ukusebenza besuka emakhaya kanti ngenkathi i-Social distancing isasebenza futhi amazwe amaningi
I-superyacht charter eziqhingini zaseBalearic yithuba elihle kakhulu lokuzwa ezinye zezindawo ezinhle kakhulu olwandle lwaseMedithera. Futhi ukuqasha isikebhe semoto esihlanganisiwe
Ukuqashwa kwesikhathi eside e-Ibiza
Ngenkathi amakhulu abantu baseYurophu bekhombisa emigwaqweni elwa nohulumeni babo ngokunqunywa kokuvalelwa kwabo, okuphinde kwabavalela emakhaya abo benethuba lokuhamba
I-villa Ekhethekile Ebizayo E-Ibiza Ebhekene Nolwandle
Isitayela Esimnandi Esincane Sase-Villa E-Ibiza
I-Villa Enhle Yesimanje Futhi Yesitayela E-Ibiza
I-Contemporary Villa E-Ibiza
Akukho okudlula ulwazi lwethu lwangempela lwendawo nge-Ibiza.
Sishayele usizo, amanani amahle kakhulu kanye nensizakalo ye-concierge.
Ama-Villas e-Ibiza | Izindlu nama-villas anechibi, lokuqasha nokuthengisa esiqhingini sase-Ibiza.
Ukukhethwa kwama-villas okuqashwa
Iqoqo eligcwele >>
Indawo enhle e-Ibiza enokubukwa kolwandle kuwo wonke amagumbi endlu
Kusuka ku-1.200 € / ngosuku
Indawo enhle ebiyelwe ngokuphelele e-Ibiza ukubukwa okuhle kolwandle
Impahla eqashisayo efihliwe yase-Ibiza enemibono emihle kakhulu
Kusuka ku-2.000 € / ngosuku
I-Blog, Umagazini, amathiphu we-Ibiza
Umagazini Ogcwele >>
Inkinga itholwe Efomini elilandelayo. Ukuyihambisa kungase kubangele amaphutha. Sicela uxhumane nomphathi wesayithi.
Ngifuna ukubhuka Ngifuna ukuthenga indawo Ngifuna imininingwane
Ama-villas Izindawo Amazwe
I-Avinguda de Santa Eulària des Riu, 17, Ibiza,